विदेशबाट उद्दार गर्ने कार्ययोजना तयार, पैसा तिरेर होटल क्वारेन्टिनमा समेत बस्न पाइने
काठमाडौं,१६ जेठ ।
सरकारले तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उद्धारसम्बन्धी कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको १२ जेठको बैठकले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार समितिले ककसलाई कुन चरणमा उद्धार गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले बताए ।
पहिलो प्राथमितामा को कस्ता व्यक्ति पर्नेछन् ?
सचिव विडारीकाअनुसार अहिले प्रारम्भिक सूची बनेको छ र त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूताबासमार्फत अन्तिम रुप दिएपछि उद्धार सुरु हुनेछ । ‘८र१० दिनमा मन्त्रालयले अन्तिम सूची बनाएपछि उद्धार सुरु हुन्छ’ समितिमा रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले करिव २५र३० हजारको सूची छ ।’
को को छन् फोकल मन्त्री र?
फोकल मन्त्री (संयोजक)हरुः
प्रदेश १ :भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङ
प्रदेश २ : श्रममन्त्री रामेश्वर राय
वाग्मती प्रदेश : महिला वालवालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ
गण्डकी प्रदेश : भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल
प्रदेश ५ : उर्जामन्त्री वर्षमान पुन
कर्णाली प्रदेश : वनमन्त्री शक्ति बस्नेत
सुदूरपश्चिम प्रदेश : उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट
अष्ट्रेलियामा २ नेपाली युवायुवतीको धन्दा - छिटो धनीहुने चालमा प्रहरीको फन्दा ...
एक वृद्धाको हज्जारौं डलर ठगी गरेको आरोपमा दुई नेपाली पक्राउ